ကျွန်ုပ်တို့ထံ လှမ်းလာခဲ့ပါ - Inle Heritage
နံနက် ၇ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ
(Tharaha Inle Heritage ဧည့်သည်များမှလွဲ၍)
အင်းပေါခုံကျေးရွာရှိ အင်းလေးအမွေအနှစ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကိုယ့် အစီအစဉ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း စီစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့များဖြင့် သော်လည်းကောင်း လှည့်လည် လေ့လာ ကြည့်ရှု နိူင်သလို မြန်မာ မျိုးရင်း ကြောင်များ နှင့် ဆော့ ကစားခြင်း၊ အင်းလေး ရိုးရာဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများကို သင်ယူခြင်း၊ ဒေသခံ မူလ လက်မှုပညာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရိပ်ရပြီး လေနုအေးများ တိုက်ခတ်နေသော ဝရန်တာများပေါ်တွင် အစားအသောက်များဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ အနားယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tours are available at 11:30am and 14:30pm at every hour interval every day,but please book ahead to guaranteeaplace.
If you are arriving withagroup and would like to arrangeatour, contact us separately.
ကန်ထဲရှိ ချက်ပြုတ်နိုင်သောအစားအစာများကို ရှာဖွေတတ်ရန်နှင့် အင်းသားရိုးရာဟင်းလျာစစ်စစ်များကို ကျွမ်းကျင်သည့် စားဖိုမှူးများနှင့် အတူတကွ ချက်ပြုတ်နိုင်ရန် သင်ယူပါ။
သင်တန်းချိန်သည် ၂နာရီခန့် ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် အဖွဲ့လိုက် စီစဉ်သူ သို့မဟုတ် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား စီစဉ်သူဖြစ်ပါက ကျွနု်ပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပြီး အထူးအစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ခရီးစဉ်များလည်း စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။
အင်းလေးဒေသနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းရှိ ကျောင်းများအား ကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး လာရောက် လည်ပတ်မှုအား ပျော်ရွှင်စရာကောင်း သည့် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တစ်ခု ဖြစ်စေရန်အတွက် ကူညီပေးမည် ဖြစ်သည်။
အင်းလေးဒေသနှင့် သင့်တော်သည့် အကောင်းဆုံး ရေဆိုး သန့်စင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ကျွနု်ပ်တို့ထံတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
IHHVTC မှ သင်တန်းဆင်း အောင်မြင်ပြီးခဲ့သည့် မျိုးဆက်သစ် ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအား သွားရောက် လေ့လာခွင့်လည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲများ ကျင်းပရန်နေရာနှင့် အစည်းအဝေးခန်းမများ ငှားရမ်းရန် ရှိပြီး ကန်ပေါ်တွင်ရှိသည့် အကောင်းဆုံး ကျွေးမွေး ဧည့်ခံမှုများလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ တည်နေရာကို လှေဖြင့်သာ လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အင်းပေါခုံကျေးရွာရှိ ယက်ကန်းနှင့် လက်မှုပညာ အလုပ်ရုံများဆီသို့ သွားသည့် ရေလမ်းကြာင်း ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။
အင်းလေးသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရန်။
လေယာဉ်ဖြင့် – အင်းလေးဒေသသို့ လာရန်အတွက် ဟဲဟိုးလေဆိပ်တွင် ဆင်းသက်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဘတ်စ်ကားဖြင့် – ညောင်ရွှေသို့သွားသည့် ဘတ်စ်ကား စီးပါ။
ဘတ်စ်ကားသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဂိတ်မှ စတင် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မြို့နှင့်အနည်းဆုံး တစ်နာရီခန့် ခရီးရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ခရီးသွားရန်အတွက် အချိန်ပိုထားပါ။
အင်းလေး အမွေ အနှစ် မြေပုံအား Download လုပ်ရန်